Wararka - Maxaa loo doortaa mashiinada cadayashada
Maxaa loo doortaa mashiinada cadayashada
Maaddaama sagxadaha xarumaha laga dukaamaysto iyo saldhigyadu ay u badan yihiin marmar ama dhoobada dhoobada, noocyada dabaqyada noocan ahi waxay leeyihiin baahiyo aad u sarreeya oo xagga nadaafadda ah, ka dib, waxay matalaan sawirka goob dadweyne. Sidaa darteed, shaqada nadaafadda waa in si taxaddar leh loo sameeyaa. Si tartiib tartiib ah, qaar ka mid ah hababka dhaqameed ee nadiifinta ah uma sii buuxin karaan shuruudaha nadiifinta ee xilliyadan, iyo soo ifbaxa iyo adeegsiga mashiinnada cadayga ayaa si buuxda u beddelay shaqada gacanta ee nadiifinta dabaqa ee warshado badan.
Qaababka nadaafadda soo jireenka ah, badanaa waxaa jira xaalado aan nadaafaddu ku jirin, sida qaar geesaha dhinta ama qaar wasakh ah oo ay adag tahay in laga soo saaro. Hadday wasakhda la ururiyo markasta, dhulku wuxuu isu beddelayaa huruud iyo madow muddo kadib, taas oo saamaynaysa bilicsanaanta. Intaas waxaa sii dheer, aagaga goobahan dadku aad u ballaaran yihiin, haddii aad rabto inaad shaqo wanaagsan ka qabato nadiifinta dhulka, waxaad u baahan tahay inaad qorto shaqaale fara badan oo nadaafadda ah si ay u fuliyaan, taas oo ah kharash aad u badan marka la eego kharashyada shaqaalaha.
Isticmaalka mashiinka cadayashada dhulka ayaa si fiican u xalin kara dhibaatooyinka kor ku xusan. Inta badan waa hawlgal mashiin. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ku darto saabuun, taas oo aan dhameystirneyn oo keliya nadiifinta dhulka, laakiin sidoo kale waxay leedahay faa'iidooyinka yareynta xoogga shaqada ee shaqaalaha nadaafadda, hagaajinta waxtarka shaqada nadiifinta iyo yaraynta kharashka hawlgalka nadiifinta. Waqtigan xaadirka ah, tikniyoolajiyadda mashiinada nadiifinta ayaa sidoo kale si isdaba joog ah u soo koraya, aan sugno oo aan aragno.
Horumarinta sayniska iyo tikniyoolajiyadda, hababka nadiifinta iyo dhaqsaha badan ee nadaafadda ee naloo keenay qalabka sida kuwa kaxeeya gawaarida iyo burushyada dhulka ayaa aad iyo aad ugu sii adkaanaya in laga tago. Gaar ahaan xilligii hawlgalka mashiinka caqliga badan, waxtarka iyo habboonaanta ayaa aad muhiim u ah.
Sida dukaamada waaweyn, suuqyada wax laga iibsado iyo xarumaha tareenka ee aan inta badan tagno kana soo gudubno, mararka qaarkood waxaan arki karnaa tirada agabyada kala duwan ee nadaafadda sida mashiinnada cadayga ee dhulka.
Dhagax midabkiisu fudud yahay iyo dhagax miridhku dhammaantood waa granites oo qaab dhismeedka lamellar ah. Marka lagu daro nuugista biyaha caadiga ah ee granite, sababta oo ah midabka cad ee fudud, waxaa jiri doona meel biyo ah ama wasakheyn ah, raadadka biyuhuna ma sahlana in la waayo. Intaa waxaa dheer, dhagaxan dartiis waxaa sidoo kale weheliya birta firfircoon ee dhagaxa, deegaanka qoyan wuxuu u horseedi doonaa miridhku. Marka la eego arjiga dhagaxa iyo kalkaalinta, waxaan leenahay waayo-aragnimo fara badan oo urursan, iyo khibradahaan soo-saarka iyo tikniyoolajiyada la xiriira. Sanado badan oo ah soo saarista wax soo saar iyo hal-abuurnimo, Nidaamkeena Dayactirka Dhagaxu wuxuu noqday doorashada ugu kalsoonida badan ee warshadaha laxiriira dhagaxa Shiinaha iyo adduunka.